27 Jolay 2020 - FJKM Québec - Canada
26 juillet 2020 by Njaka Ramanandafy
Ny fahatongavan’i Jesoa Kristy Mpanafaka
LIOKA 4 : 14-21
4:14 Ary i Jesosy niverina tamin’ny herin’ny Fanahy nankany Galilia; dia niely tamin’ny tany rehetra manodidina ny lazany.
4:15 Ary Izy nampianatra teny amin’ny synagogan’ny olona ka nankalazain’izy rehetra.
4:16 Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ny synagoga tamin’ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny.
4:17 Dia natolotra Azy ny bokin’i Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe:
4:18 Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina,
4:19 hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah (Isa 61.1, 2).
4:20 Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin’ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika Azy ny mason’izay rehetra teo amin’ny synagoga.
4:21 Ary i Jesosy niteny taminy hoe: Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.
«Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany zavatra izany » (and21)
Teny nataon’i Jesoa Kristy izany , rehefa avy namaky ny voasoratra tao amin’ny bokin’ny Isaia mpaminany izay ahitana filazana fa « hanafaka izay nampahoriana » (and19) izy . Efa voalaza hatramin’ny ela ny fahatongavan’ i Jesoa Kristy hitondra fanafahana sy famonjena ho an’izao tontolo izao , ary tanteraka izany eto . Araka izany , tsy maintsy tanteraka ny teny rehetra nampitondrain’ Andriamanitra ny mpanompony na ho ela na ho haingana . Koa minoa ny Tenin’Andriamanitra rehetra voalaza ao amin’ny Soratra Masina fa tsy maintsy ho tanteraka izany .
« Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana naloaky ny vavany » (and22)
Fantatr’ireto olona ireto i Jesoa satria mpiara-monina taminy ary nahatonga azy ireo ho gaga sy talanjona . Ankoatra izany , ny teny fahasoavana nataon’i Jesoa teo anatrehan’izy ireo no niteraka fifaliana ho azy , indrindra fa ny fahafantarany an’i Jesoa no Ilay Mpamonjy sy Mpanafaka , ka nahatonga azy nanome voninahitra an’Andriamanitra . Koa tsarovy mandrakariva fa miteraka fifaliana ho an’ny olona ny fahafantarany an’i Jesoa Kristy ho Mpamonjy sy Mpanafaka azy . Ary ny olona mahafantatra Azy ho Mpamonjy sy Mpanafaka ihany no mahay mankalaza an’Andriamanitra .
Hatraiza ny finoanao ny voalazan’ny Soratra Masina ? Ahoana ny fihetsemponao raha mandre fa i jesoa no Mpanafaka ?